प्रधानसेनापति महिला फुटबल, उपाधि कस्को पोल्टामा ? | Sagarmatha TVSagarmatha TV प्रधानसेनापति महिला फुटबल, उपाधि कस्को पोल्टामा ? | Sagarmatha TV
प्रधानसेनापति महिला फुटबल, उपाधि कस्को पोल्टामा ?
एपीएफ र आर्मी आमने–सामने
काठमाडौं । प्रधानसेनापति छैटौं अन्तर्राष्ट्रिय महिला फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि दुई विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरीको नेपाल एपीएफ र आर्मीको टोली मैदानमा उत्रिंदैछन् । सोमबार भएको सेमिफाइनलमा विभागीय टोली एपीएफले अर्को विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई ३–० गोल अन्तरले पराजित गर्दै फाइनलको यात्रा तय गरेको थियो भने दोस्रो सेमिफाइनलमा अर्को विभागीय टोली आर्मीले प्रदेश २ लाई ४–० गोल अन्तरले पराजित गर्दै एपीएफसँगको भेट पक्का गरेको थियो ।
प्रधानसेनापति कपको उपाधि जित्न डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपाल एपीएफ कडा रुपमा मैदानमा उत्रिने तयारीमा छ भने आर्मी पनि एपीएपफलाई हराउँदै उपाधि चुम्ने दाउमा छ । दुई विभागीय टोली उपाधि आफ्नो पोल्टामा पार्ने दाउँमा देखिएका कारण दुई टोली बीचको खेल रोचक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसो त लगातार तीनपटक उपाधि कब्जा गरिसकेको विभागीय क्लब एपीएफ चौथो उपाधि उचाल्ने रणनीतिका साथ मैदानमा उत्रिने छ । खेल दिउँसो १ बजे भद्रकालिस्थित सेनाको मैदानमा सुरु हुनेछ । पछिल्लो दुईपटक फाइनलमा एपीएफललाई उपाधि सुम्पीएको आर्मी यसपाली घरेलु मैदानमा ट्रफी उचाल्ने उद्देश्यमा हुनेछ ।
तर अधिंकाश राष्ट्रिय खेलाडी रहेको एपीएफलाई हराउनु आर्मीका लागि सहज पक्कै हुने छैन । साउनमा एन्फा मैदानमा भएको उपराष्ट्रपति महिला लिगमा प्रतिस्पर्धा गरेयता एपीएफ र आर्मी यो वर्ष दोस्रो पटक भिड्न लागेका हुन् । महिला लिगमा एपीएफ च्याम्पियन बनेको थियो भने आर्मी उपविजेता भएको थियो । आर्मीले १ पटकमात्र प्रधान सेनापति महिला फुटबलको उपाधि जितेको छ ।
२०७० सालबाट सुरु गरिएको प्रतियोगितामा एपीएफले २०७२, ०७३ र ०७४ मा गरी लगातार तीन पटक ट्रफी जितेको छ । ०७२ सालमा आर्मीलाई हराउँदै उपाधि उचालेको एपीएफले ०७३ सालको फाइनलमा रौतहट तथा ०७४ मा फेरि आर्मीलाई निराश पार्दै उपाधि जितेको थियो । त्यसअघि पहिलो संस्करणको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबले जितेको थियो । प्रतियोगिताको विजेताले ३ लाख, उपविजेताले १ लाख ५० हजार र सेमिफाइनलबाट बाहिरिएका पुलिस र प्रदेश नम्बर दुईले ५० –५० हजार पुरस्कार पाउने छन् ।